Kungani Usikhetha | Jiangxi OK Isayensi Nobuchwepheshe Co., Ltd.
I-OK Technology inethimba eliqinile nelichwepheshe eligxile kwimishini yamaphepha wezicubu nemishini yokwenza imaski iminyaka engaphezu kwengu-10.
usihlalo wethu uMnu Hu jiangsheng ubuye abe unjiniyela wethu ohola phambili
ezingaphezu kuka-60 abacebile abanolwazi umshini abaklami, onjiniyela abangaphezu kuka-80 nge passport futhi ocebile service phesheya kwezilwandle.
Yonke imenenja yokuthengisa okungenani ineminyaka eyishumi ulwazi lomkhakha wemishini nesipiliyoni yingakho bangaqonda ngokushesha ukufunwa kwakho futhi bakunikeze isiphakamiso semishini ngokunembile.
2.Lonke Line "Turkey Project"
Sihola phambili ekuphakamiseni nasekusebenziseni umugqa wonke wensizakalo "we-turnkey project" embonini. Imikhiqizo yethu ikhava kusuka kumshini we-jumbo roll paper kuya emishinini yokuguqula iphepha nemishini yokupakisha ukuze ikhasimende lethu lijabulele insiza eyodwa. Sizoba nesibopho sokusebenza komugqa wonke womshini nekhwalithi futhi sigweme ukuphikisana phakathi kwabahlinzeki bemishini ehlukahlukene.
Sinemishini ehlukahlukene enekhono elihlukile lokukhiqiza, ibanga elihlukile lokuzenzekelayo ukuze wonke amakhasimende akwazi ukuthola imishini efaneleke kakhulu ehambelana nesilinganiso namandla awo.
3. Ikhwalithi enhle nentengo enengqondo, ngemuva kokuthengiswa ngaphandle kokukhathazeka
Umqondo we-OK Technology uthi "Ukuzethemba kuvela kumakhono wobungcweti, ukwethemba kuvela kwikhwalithi ephelele". Ngaphansi kwesisekelo sokuqinisekiswa kwekhwalithi, besilokhu sinikeza amanani amahle kakhulu kumakhasimende.
Uhlelo oluphelele futhi oluzinzile ngemuva kwensizakalo yokuthengisa luqinisekisa ukuthi ikhasimende lingathola imenenja yakho yokuthengisa nonjiniyela ngokushesha futhi ithimba lethu lizohlala likusekela ngocingo, ama-imeyili, isithunywa esisheshayo noma ngabe kuthengwa izingxenye ezisele noma ukuxazulula inkinga ngomshini. Akukho ukukhathazeka mayelana nesevisi yokuthengisa ngemuva.